Ikhabethe le-Moose enhliziyweni ye-Moose Country Alaska! - I-Airbnb
Ikhabethe le-Moose enhliziyweni ye-Moose Country Alaska!
Ninilchik, Alaska, i-United States
I-indlu eyakhiwe ngamapulangwe ephelele ibungazwe ngu-Daniel
Siyakwamukela ku-Wildman Getaway! Le khabethe esanda kulungiswa kabusha inekhishi eligcwele, igumbi lokugezela elineshawa, umbhede wendlovukazi osezingeni elikhulu, kanye nemibhede engu-4 yabantu abangabodwa endaweni ephezulu kanye nompheme ongaphambili ukuze uziphumulele futhi ubukele izilwane zasendle. Kukhona nendawo yokuwasha etholakala eWash House.
Itholakala enhliziyweni yezwe le-moose, uzoba nethuba elanele lokubona ama-moose, ama-turkeys asendle, ama-sandhill cranes nezinye izilwane zasendle. Kuwuhambo olufushane futhi oluhle kuphela lwamamayela ayi-1.7 ukuya e-Kenai Peninsula Fair Grounds.
I-Wildman Getaway iwukuzizwisa okuyimfihlo kwe-Alaska okuthokomele okutholakala eNhlonhlweni yase-Kenai, nokho iyimizuzu emi-5 kuphela ukusuka esitolo sendawo se-3 Bears futhi izungezwe izindawo zokudoba ezisezingeni lomhlaba e-Kenai naseHomer. Kungcono kakhulu kuyo yomibili imihlaba!
Umakhelwane uyindawo ethule, enokuthula nomakhelwane abadlula bexoxa uma bekubona usebenza egcekeni. Imoto iyisidingo ukuze uhlale futhi ingaqashwa esikhumulweni sezindiza sase-Kenai noma sase-Anchorage. Sicela uhlele kusasele izinyanga ezimbalwa njengoba isidingo sezimoto eziqashwayo siphezulu ngesikhathi sokudoba kuyilapho ukutholakala kuncane.
Ngiyohlala ngibuhlonipha ubumfihlo bakho ngesikhathi sokuhlala kwakho, noma kunjalo, ngicela ukhululeke ukungishayela/ukuthumela umbhalo nganoma yisiphi isikhathi ku-425-773-9955 uma unemibuzo noma yiziphi izidingo eziphakamayo. Ngiyatholakala ukuze ngisize ngokushesha.
Ngiyohlala ngibuhlonipha ubumfihlo bakho ngesikhathi sokuhlala kwakho, noma kunjalo, ngicela ukhululeke ukungishayela/ukuthumela umbhalo nganoma yisiphi isikhathi ku-425-773-9955 u…
Hlola ezinye izinketho ezise- Ninilchik namaphethelo